"Waxa Jira Ciyaartoy Kala Duwanaansho Sameeya Sida Messi, Ronaldo, Neymar Kaddibna Aniga Ayaa Soo Raaca" - Xiddig Si Lama Filaan Ah Isku Amaanay - Gool24.Net
“Waxa Jira Ciyaartoy Kala Duwanaansho Sameeya Sida Messi, Ronaldo, Neymar Kaddibna Aniga Ayaa Soo Raaca” – Xiddig Si Lama Filaan Ah Isku Amaanay
Xiddiga ree Brazil ee usoo ciyaaray kooxaha Juventus iyo Inter Milan ee Felipo Melo ayaa si lama filaan ah naftiisa ugu daray qaar kamida xiddigaha ugu wanaagsan jiilkan kubadda cagta ee haatan oo uu sheegay inay kala duwanaansho sameeyaan.
Melo ayay dhawaan isku dhaceen hadalona hawada isku mariyeen kabtanka Juventus ee Giorgio Cheillini kaas oo ku sifeeyay kuwa xun xun midka ugu sii xun.
Felipo Melo ayaan Cheillini kaga hadhin hadalka uu wax kaga sheegay waxaana uu xusay inay isaga iyo Cheillini hore usoo dhex martay xurgufi isla markaana aysan wada hadal tan iyo mar ay isku dhaceen.
Dhinaca kale, Melo ayaa sheegay inuu yahay ciyaartoy tayo leh maadaama oo uu kusoo guuleystay 15 koob waayihiisa ciyaareed waxaana uu dhinaca kale xusay inuu sida Ronaldo, Messi iyo Neymar kulamada ku sameeyo kala duwanaansho.
Intaa waxa dheer in Melo uu sheegay inuu Juventus ku laaban doono haddiiba ay soo wacdo isla markaana uu jeclaan lahaa inuu ka garab ciyaaro Cristiano Ronaldo.
“Waxa jira ciyaartoy sameeya kala duwanaansho, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar…..kaddib waxa jooga aniga, Felipo Melo, darbadaha (taakooyinka) aan sameeyaana, waa wax aan si aad u wanaagsan u sameeyo” ayuu ugu horreynba yidhi Felipo Melo.
“Umaan tagin Juventus, Inter, Fiorentina ama Galatasaraay taakooyinka aan garoonka dhexdiisa ku sameeyo, waxaan ku guuleystay 15 koob sidaas darteed waxaan leeyahay waxoogaa tayo ah”
“Haddii ay Juve isoo wacdo si aan ula ciyaaro Cristiano, waan ku laaban doonaa, Barcelona waxa ay doonaysay De Ligt, Cristiano Ronaldo ayaa isaga wacay haatana waxa uu jooga Juve, waa 20 sano jir”